Se acercan cambios a Apple News; el tutorial de diseño también mejora | Actualidad iPhone
Ho avy ny fiovana amin'ny Apple News; mihatsara ihany koa ny tutorial momba ny famolavolana
Ireo avy amin'ny Cupertino dia nanolotra Apple News Herintaona mahery izay, fa ireo firenena toa ny toerana nanoratan'ny mpizara iray, dia mbola miandry (efa mamoy fo ... ary manadino) izahay vao afaka mampiasa azy io nefa tsy mila manova ny faritra onenanay amin'ireo toe-javatra iPhone. Ny zavatra tsara miandry ny fipetrahany eto amintsika dia rehefa tonga izy (raha tonga indray andro any ...) dia ho voakilasy kokoa noho ny tamin'ny fotoana nanombohana izany tany amin'ny faritanin'i Amerika Avaratra.
Manazava ny etsy ambony aho satria nanambara fanavaozana ny Apple News Format sy a fanitsiana lehibe ny tutorial momba ny famolavolana ny famoahana boky izay hanampy ny haino aman-jery hamorona lahatsoratra hanehoana ny atiny ao amin'ny rindrambaiko Cupertino. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny nambaran'i Tim Cook sy ny orinasa dia fitaovana ho an'ny fampiharana ny News mba hanana endrika am-pitandremana bebe kokoa sy fiasan-dàlana bebe kokoa.
Rahoviana no hiala any Etazonia ny Apple News?
Apple News Format izao dia ahitana ireto manaraka ireto:
Tanisao ny fomba fanao ho an'ny endrika HTML: Afaka mampiasa bala, isa, litera, tarehimarika romana na litera fanao amin'ny lisitra miendrika HTML izao ianao. Ny fananana listItemStyle vaovao amin'ny fomban'ny lahatsoratra dia mamaritra ny fomban'ireo entana ao anaty lisitra izay mampiasa ny endrika HTML.
Fametrahana MREC mandeha ho azy amin'ny iPhone sy iPod touch- Miaraka amin'ny fenitra, haavo avo roa heny ary sora-baventy lehibe, ny singa dokam-barotra MREC dia azo ampidirina ho azy ao amin'ny lahatsoratra Apple News Format zahana amin'ny iPhone sy iPod touch.
Ho an'ireo hafatra izay vaovao amin'ny Apple News Format na te hanatsara ny fomban'izy ireo ankehitriny, ny tutorial vaovao hampianatra azy ireo hamorona, hamolavola ary hanaingo lahatsoratra tsara tarehy kokoa amin'ny alàlan'ny JSON, hahafahana misintona ny ohatra JSON na manomboka amin'ny 0, maka tahaka sy mametaka snippets an'i JSON ao anaty antontan-taratasy vaovao.
Na izany na tsy izany dia ilaina ny mijery raha toa ka lasa mandefa azy na tsia ireo mpampiasa avy amin'ny firenena izay tsy afaka mampiasa ilay rindranasa. Herintaona sy tapany / roa amin'ny teknolojia dia izao tontolo izao ary efa zatra mampiasa fomba hafa aho. Ary ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ho avy ny fiovana amin'ny Apple News; mihatsara ihany koa ny tutorial momba ny famolavolana
Ahoana no ahafantaranao raha toa ny "Wi-Fi Support" manala ny tahan'ny data-nao
Olana amin'ny Pixel: ny fangatahan'izy ireo dia tsy mahatratra ny ampahafolon'ny an'ny iPhone 7